Zimbabwe rejects Carter humanitarian mission - USATODAY.com
World War casualties Zimbabwe rejects Carter humanitarian mission
Former U.S. President Jimmy Carter, left, pictured with former UN head Kofi Annan, and Graca Machel, wife of former South African President Nelson Mandela at a news conference in Johannesburg, says he and others have been refused entry to Zimbabwe for a humanitarian mission. Carter says he and other members of The Elders group were informed Friday night by former South African President Thabo Mbeki that efforts to secure travel visas had failed.
JOHANNESBURG, South Africa (AP)  Zimbabwe has refused to let Kofi Annan, Jimmy Carter and a South African human rights advocate visit the impoverished country for a humanitarian mission, the three said.
Annan said Saturday that no official reason had been given for the refusal, but Zimbabwe's state-run Herald newspaper reported that the group had been asked to "come at a later date" to accommodate the crop-planting season. It quoted an unnamed source as saying they were seen as antagonistic toward Zimbabwe's government.
"We are very disappointed that the government of Zimbabwe would not permit us to come in, would not cooperate," former U.S. President Jimmy Carter said at a news conference in Johannesburg.